UChris Brogan Rocked BlogIndiana | Martech Zone
UChris Brogan Rocked BlogIndiana
NgoMgqibelo, Agasti 15, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
“Manje sengiyazi ukuthi kungani ufuna ukungizonda!”, Kumemeza uChris (ala Limp Bizkit) ngesinye isikhathi engxoxweni yesigungu. Umbuzo ububhekise kokukhipha abazondayo emhlabeni wezokuxhumana. Iqiniso ngukuthi, njengoba abantu abaku-inthanethi bezakhela igama labo futhi bathuthukisa izwi labo nobungoti ezimbonini… abanye abantu bazobazonda ngakho. Ngiyangabaza ukuthi kukhona umuntu omzondayo uChris Brogan… kepha uma bekwenzile kungenxa yethalente lakhe elihle.
UChris wayenendawo enhle yesilayidi kanye nesethulo esithandekayo - kufaka phakathi amareferensi amasiko we-wacky pop (kufaka phakathi uFergy!), Ukuxhumana nesixuku (ukusigxeka ngokuba nabagijimi abambalwa kuphela egumbini!), Nesethulo esipholishiwe. Kunethalente eliyisimanga engilibona kuzipika ezinjengoChris engilibona kuMalcolm Gladwell, Seth Godin nakwabanye… ikhono lokuthatha udaba olunzima kakhulu noluyinkimbinkimbi futhi baluchaze kalula.
UBrogan ukwenze lokhu ngokuqhubeka kwakhe kophawu lwesimanje nokuthi izinkundla zokuxhumana zingena kanjani, kusuka Ukuqwashisa Ngezenzo Ezandisiwe. Funda kokuthunyelwe ukuthola imininingwane, nansi amazwibela wami:
Ukuqwashisa - Ukusetshenziswa kokumaketha okusebenzayo ukwethula wena, umkhiqizo wakho, noma insiza yakho.
Attention - Ukusetshenziswa kwezindlela zokuxhumana nabantu ukuhlinzeka abantu ngezindlela zokubamba iqhaza.
ukuzibophezela - Ukuxhumana okusimeme phakathi kwakho nomphakathi wakho.
Ukubulawa - Ukuguqulwa… ukulanda, ukubhaliswa, ukuthengwa, njll.
Isandiso - Ithuba ngemuva kokubulawa lokukhuthaza umcimbi nemiphumela.
UChris wenze umsebenzi onobuhlakani nobunzima lapha wokuchaza inqubo, ngakho-ke ngizofaka amasenti ami ama-2. (Ngiyakuzonda ukwenza lokhu… kungenza ngizwakale sengathi ngiphendula i-piggyback… Ngicabanga ukuthi ngiyiyo!) Ukuze ngiguqule lokhu kusuka ekuqhubekeni kuye kumjikelezo, ngingeza Analysis.
Ngicabanga ukuthi Ukuhlaziywa kuyisihluthulelo… kokubili ekuqaleni nasekupheleni kwenqubo ukuze ibhizinisi likwazi ukuqala inqubo ngamandla amaningi wehhashi - kanye nokucwenga nokwenza ngcono inqubo isikhathi ngasinye. Ukulinganiswa kwemiphumela kubalulekile ukuze amabhizinisi aqonde ukuthi angazisebenzisa kuphi izinsiza zawo ezinomkhawulo ngomthelela omkhulu.
Ngingakafundi incwadi kaChris 'noJulian - ngilangazelele ukuyicosha futhi ngibone ukuthi ukuthuthukiswa nokukalwa kwecebo kudlala kanjani ekuqhubekeni.
#BlogIndiana: UJason Falls, amaBlogger nonkulunkulu beGoogle
Ividiyo: Isebenza Kanjani Imidiya Yezokuxhumana
UChris Brogan ...
Aug 16, 2009 ku-2: 27 AM
Ngikuthanda kakhulu ukusho, uDoug. Ngibe nesikhathi esinqabile, futhi ngijabule ukuba nawe egumbini, njengenye yezinkanyezi zasendaweni. Ngiyethemba ibiwusizo, futhi ngilangazelela ukukubona futhi maduze. :)
Aug 17, 2009 ku-2: 36 AM
Asikwazi ukulinda izindlela zethu zokuwela futhi!
Aug 16, 2009 ngo-11: 18 PM
Sawubona Doug, ngiyavuma ukuthi ukufaka Ukuhlaziywa kuyisinyathelo esibalulekile, kepha ngicabanga ukuthi ukubeke endaweni engafanele. Bengizokwenza Ukuhlaziywa ngemuva Kokubulawa nangaphambi Kokwelulwa, ngoba i-Extension ngempela iyindawo yokuqala, hhayi indawo yokuphela.
Aug 17, 2009 ku-2: 38 AM
Nginawe, Tim. Ngikuthwale kanzima ukungafaki ukuhlaziywa phakathi kwazo zonke izinyathelo! Ngiyi-geek ephelele mayelana nokulinganisa nokuqapha. Iningi lethu limatasa kakhulu ngokwenza ukuthi asivamisile ukuthatha isikhathi.
Bekukuhle impela ukuchitha isikhathi nawe kuleli sonto, Tim! Uma ungathanda ukwenza okuthunyelwe kwebhulogi lezivakashi - sicela welule isandla!